Boky tsara indrindra momba ny tantaram-piainana
Avy ao anatiny, nataon'i Martin Amis
Ny literatiora amin'ny maha fomba fiainana indraindray dia mipoaka amin'ny asa iray mijoro eo an-tokonan'ny fitantarana, ny tantaram-piainana ary ny tantaram-piainana. Ary izany no fiafarany dia ny fampiharana amin-kitsimpo indrindra ataon'ny mpanoratra izay mampifangaro aingam-panahy, evocations, fahatsiarovana, traikefa ... Izay atolotr'i Martín Amis antsika amin'ny ...
Hildegarda, nalain'i Anne Lise Marstrand-Jørgensen
Ny toetran'i Hildegarda dia mampahafantatra antsika ny haben'ny angano. Ao ihany no misy ireo angano momba ny olo-masina sy mpamosavy manana ny lanjany mitovy amin'izao androntsika izao. Satria ny fahagagana ankehitriny hamerenana jamba dia manana hafetsena mitovy amin'ny ody mahay ...
Escombros, nataon'i Fernando Vallejo
Ny zava-drehetra dia mora tohina. Mbola mihoatra noho izany aza, ny fiainana amin'ny maha-olona iray dia manalavitra ny fipoahan'ny taona. Avy eo koa ireo poti-javatra rava, izay tsy nahazoana ireo fahatsiarovana lehibe ireo ara-potoana. Satria rahateo, tsy misy fahatsiarovana mitazona ny mikasika na ny feo miaraka amin'ny ...
Ny Afo tsy mety maty nataon'i Stephen Crane nataon'i Paul Auster
Ny Wild West, toy ny synecdoche an'ny tanindrazana amerikana miforona, dia nanitatra ny fisainany, ny hadalany ary ny endriny mankany amin'ny firenena goavambe iray feno fahatsapana sy fahatokiana momba ny zava-drehetra. Tsy azo atao mihitsy ny mampiahiahy zavatra iray heterogenezy toy izany fa hatsangana amin'ny firenena toy ny ankehitriny ...
Raha mijery ny lasa, nataon'i Juan Gabriel Vásquez
Misy zavatra hafa mampidi-doza noho ny fikomiana ankehitriny. Saika ny rehetra dia ampidirina amin'ny alàlan'ny maha-ara-dalàna ny faharesen-dahatra an'ilay manameloka ilay mangina, na dia ny fahanginana aza dia avy amin'ny fahanginana, avy amin'ny famonoana ny mifanohitra amin'izany. Toy izany no hiafaràny, alentika anaty vahoaka, resy lahatra amin'ny fanentanana ...
Vehivavy mpamono olona: Vehivavy mahafaty amin'ny tantara, nataon'i Tori Telfer
Tsy azo iadian-kevitra io famonoana olona io. Oswald, ilay mpamono olona miaraka amin'ny bokiny The Catcher in the Rye eo ambanin'ny sandriny, na ny York Ripper na koa ny "The Wolf of Moskoa" aza mety hahatratra ny androntsika izao. Fa eny, misy koa ny vehivavy tia ny heloka bevava mamitaka indrindra ...
Vehivavy fanahiko, ny Isabel Allende
Mahafantatra am-po ny lalana mankany amin'ny loharanon'ny aingam-panahy, Isabel Allende Amin'ity asa ity dia mivadika ho fitenenan-dratsy misy ny fahamatorana izay iverenantsika rehetra amin'ny maha-izy antsika. Misy zavatra manaitra ahy ho voajanahary sy ara-potoana, mifanaraka amin'ny tafatafa vao haingana izay ...
Fanatanjahan-tena fahatsiarovana, nataon'i Andrea Camilleri
Mahaliana fa amin'ny tsy fisian'ny mpanoratra am-perinasa, inona no mety ho famoahana manelingelina, fandaniam-bola amin'ny fiainana, ary niafara tamin'ny fahita firy ho an'ireo mitomaniac taorian'ny nahafatesany. Fa koa fomba fiasa iray manontolo ho an'ny laika izay mety tsy namaky mihitsy ny mpanoratra izay vao tsy ela akory izay nandao ny sehatra ...
Fireproof, nataon'i Javier Moro
Vao mainka mahasarika kokoa an'i New York ny fitsidihanao fotsiny. Satria izy io dia iray amin'ireo toerana vitsy izay tsy mitazona ny andrasana fotsiny fa mihoatra ny azy aza. Indrindra raha azonao atao ny mahita azy amin'ny namana tsara izay mipetraka manerana ny afovoan-tanàna. Tsia, NY tsy mandiso fanantenana mihitsy. De maninona …